Thelekisa: I-Samsung Galaxy S20 VS Huawei P30 Pro | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Iiselfowuni, Reviews, Umnxeba
Sinezandla zethu ezibini zezalathiso zehlabathi le-Android ngokubanzi, sinento entsha Isamsung ye-Samsung S20 5G kunye negqala eliphezulu leHuawei P30 Pro. Ngeli xesha sikulethela enye yokuthelekisa okunzulu kwezi zixhobo zombini ukuze uzibone zisebenza ebusweni. Eyokuqala, ndikukhumbuze ukuba kutshanje sihlalutye i-Galaxy S20 5G ke simema ukuba sihlolisise. Kwaye ngoku Hlala nathi kwaye ufumane ukuba yintoni umahluko phakathi kweHuawei P30 Pro kunye ne-Samsung Galaxy S20 entsha yokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi engcono ekuthengeni.
1 Iikhamera: Obona buso ubuso ngobuso
2 Icandelo leMultimedia: Isamsung iyayazi into eyenzayo
3 Ukuzimela: IHuawei iyakhokela
4 Iimpawu zobugcisa kunye namava omsebenzisi
5 Amaxabiso kunye nalapho ungathenga khona zombini izixhobo
Iikhamera: Obona buso ubuso ngobuso
Iikhamera zibubungqina obucacileyo bento nganye kwezi ezinakho ukuyenza, siqala ngesixhobo sehardware esinyuka kwimodyuli yekhamera I-Samsung Galaxy S20 5G:
I-Ultra Angular: 12MP-1,4nm-f / 2.2
I-Angular: 12MP-1,8nm-f / 1.9 OIS
Ifowuni: 64MP-0,8nm-f / 2.0 OIS
Sondeza: 3x Hybrid - 30x Digital
Ikhamera yangaphambili: 10MP - f / 2.2
Ngokuqinisekileyo akukho kubi kwaphela Le yile mifanekiso siyithathileyo kunye nefemu yaseMzantsi Korea:
Zoom yasebusuku x3
Ubusuku obubanzi beAngle
Ngoku siya apho kunye naye hardware yeHuawei P30 Pro:
Umgangatho: 40MP-f / 1.8 OIS
I-Angle ebanzi ye-Ultra: 20MP-f / 2.2
Ifowuni: 8MP-f / 3.4 OIS
Zoom: 5x telephoto, 10x hybrid, 30x digital
Ikhamera yangaphambili: 32MP - f / 2.0
Ezi ziyafana Iifoto Ezifanayo zithathiwe ngeHuawei P30 Pro:
Ngokuqinisekileyo i-Samsung Galaxy S20 kunye neHuawei P30 Pro zibonelela ngesiphumo esifanayo ngokufota okuqhelekileyo, Ngelixa imowudi yasebusuku yeHuawei P30 Pro ibonakala yendalo ngakumbi, kwaye ukusondeza kucacisiwe ngakumbi kwisiphelo sendlela yaseTshayina. Ngokwenxalenye yayo, i-Wide Angle yeHuawei P30 Pro iyakwazi ukufaka ulwazi ngakumbi kwaye inenzwa ye-ToF enceda ekuchazeni umxholo ubunzulu.
Icandelo leMultimedia: Isamsung iyayazi into eyenzayo
Siqala ngepaneli, ngelixa Isamsung inyusa i-6,2-intshi yeDynamic AMOLED ngesisombululo esipheleleyo se-QHD + (563PPP) kunye nereyithi yokuhlaziya eyi-120Hz, kwi iHuawei P30 sifumana iphaneli ye-6,5-intshi enesisombululo se-FullHD + (398PPP) kunye nenqanaba lokuhlaziya elimileyo kwi-60Hz esemgangathweni. Zombini zibonisa ukuqaqamba okupheleleyo kunye nokulingana okufanayo. Ngokwesandi, bobabini banesithethi esingaphezulu esifihlwe ngasemva kwesikrini kunye nesithethi esinamandla kakhulu esisezantsi, zombini zibonelela ngesandi esicacileyo nesivakalisayo esinika amava amahle.
Huawei IP30 Pro: IDolby Atmos
Ngokwenxalenye yayo, inyani yokuba nesisombululo esiphezulu kunye nokujika okuncinci kwimeko yeGPS S20, ngokobuqu undinika amava aphezulu kumsebenzisi xa usebenzisa umxholo kunye nokunxibelelana nescreen, I-120Hz lulongezo olubalulekileyo endiluthandileyo, ke ngoko kwicandelo le-multimedia ifemu yaseMzantsi Korea iphinda ibonise isifuba sayo kwaye ibonisa ukuba ilunge kakhulu kuyo.
Ukuzimela: IHuawei iyakhokela
Kwidatha yobuchwephesha, i I-Huawei P30 Pro inyusa ibhetri eyi-4.200 mAh ehambelana nokutshaja okukhawulezayo kwe-40W kunye ne-wireless ukuya kuthi ga kwi-15W, ikwavumela ukubuyiselwa umva kwezixhobo. Kwelakhe icala, uGI-alaxy S20 ine-4.000 mAh kunye nentlawulo ekhawulezayo yokufikelela kwi-25W kunye ne-15W ngaphandle kwamacingo, Njengangaphambili, kuye kwaguqula ukutshaja ngaphandle kwamacingo. IHuawei P30 Pro ingqina ukulawula ukusetyenziswa kwebhetri okungcono, mhlawumbi inento yokwenza nenqanaba lokuhlaziya lesikrini okanye isisombululo esona siphezulu.
Ngapha koko, I-EMUI 10 kudala yabonisa ukuba iyakwazi ukulawula ukusetyenziswa kwebhetri ngcono kune-OneUI, Kwaye kubonisa ukuba kuphela nge-200 mAh ngaphezulu kweP30 Pro, sikwazile ukufezekisa iyantlukwano iyonke ejikeleze i-20%, ngokugqithisileyo ukuba sithathela ingqalelo amandla apheleleyo. Inqaku lokuhambelana okukhulu kweentlawulo ezikhawulezayo kunye nokuqina kwayo kwenza ukuba iHuawei P30 Pro ime ngokucacileyo phambi kweGPS S20, enekhethini yayo yeAchilles kwibhetri.
Iimpawu zobugcisa kunye namava omsebenzisi
Ngamafutshane, ngelixa i-Galaxy S20 entsha ineprosesa yayo I-Exynos 990 ene-7nm kunye ne-12GB ye-RAM kuhlobo oluvavanyiweyo, i-P30 Pro inyusa i-Kirin 980 nayo ngokwayo nge-8GB ye-RAM. Zombini iimodeli ezivavanyiweyo zine-128GB yokugcina, kodwa iGPS S20 inokwandiswa nge-microSD ngelixa iHuawei P30 Pro iyivumela kuphela ngememori khadi yayo. Ukusebenza ngokwendlela ngokubanzi kwimidlalo yevidiyo (PUBG) nakwimisebenzi yokusetyenziswa kwemihla ngemihla kuye kwafana, ngaphandle kokuba siqaphele ukufudumeza okubonakalayo okuthe kratya kwiGPS S20.
Kwinqanaba lokudityaniswa, i-Galaxy S20 ime ngokuba netekhnoloji ye-5G, Ngelixa i-LTE yayo iyi-Cat.20, kwimeko ye-P30 Pro asinayo i-5G kodwa i-LTE yayo yi-Cat. 21, kwinqanaba le-WiFi sifumene iziphumo ezifanayo kumandla nakwinqanaba loluhlu kwiimvavanyo zethu. Kwelinye icala Zombini ezi zixhobo zineenzwa zeminwe kwiscreen, ephendula ngokufanayo kwinqanaba lokhuseleko, kodwa oopopayi beHuawei P30 Pro bayakhawuleza, nto leyo esenza sivakalelwe kukuba umfundi weGPS S20 ucotha kancinci kunokuba kulindelwe kwisixhobo esinezi mpawu.
Amaxabiso kunye nalapho ungathenga khona zombini izixhobo
IHuawei P30 Pro ibisoloko isentengisweni unyaka wonke, kuyinyani, kodwa inexabiso elinomtsalane kakhulu xa siyithelekisa neGPS S20. Singayifumana malunga nee-euro ezingama-570 kwiiwebhusayithi ezithembakeleyo ezinje ngeAmazon, ngelixa i-Galaxy S20 5G ene-12GB ye-RAM isala kwi-1009 euro, Yiyo le nto esenza ukuba sithandabuze kakhulu malunga nokufaneleka kokufumana isixhobo okanye enye, sinethemba lokuba ngalo thelekiso sikuncede uthathe isigqibo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Thelekisa: I-Samsung Galaxy S20 VS Huawei P30 Pro
Izibonelelo eziSimahla zokuJamelana neCoronavirus Quarantine
Ezona zicelo zibalaseleyo zokusebenzela ekhaya